Ngaba yiBhiya yakho yeAle okanye yeLager-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Ngaba yiBhiya yakho yeAle okanye iLager
Ixesha: 2020-07-10 I ngxelo: 58
Ubhiya luhlobo lwemveliso enotywala eyenziweyo ngokuvundisa ngegwele endaweni yokuthambisa. Iswekile ebilayo ivela ubukhulu becala kwimithombo ye-grist efana nerhasi kunye nezinye iintlobo, inehops njengexesha lokutya. Ezona zinto ziphambili zigubungela amanzi, imithombo, ihops kunye nemvubelo njl njl. Iibhiya zeshishini zihlala zixuba enye into efana nombona ukuya kwixabiso eliphantsi ngelixa ubhiya wobugcisa unokongeza izinto ezithile ukubonisa uphawu lwayo.
Ukuthetha ngokufutshane, ukupheka ibhiya kubandakanya ukujija, lautering, ukubilisa, ukubila kunye neebhotile. Ewe iinkcukacha zenkqubo ziya kuba nzima.
Ukubila lelona nyathelo libalulekileyo, apho igwele kunye nobushushu zizinto eziphambili. Ekuqaleni kwembali yebhiya, imvubelo kunye nobushushu obubilayo abunakulawulwa kakuhle. Ku-Ale, igwele lisebenza ngaphezulu kwetanki ngamaqondo obushushu ajikeleze i-15-24 ℃ kunye nexesha le-3 ~ 21 leentsuku.
"Ukuhlawulwa" eJamani kuthetha ukugcinwa okanye ukugcinwa kwendlu kwaye ngoku ligama lebhiya, nto leyo ethetha ukuba igwele libila ezantsi kwento ebilayo.
Abanye banokucela ukuba zihlelwe njani iibhiya. Ngokuqinisekileyo kulungile ukuphendula uAle noLager, ungasathethi ke ngamacandelwana. Kufanelekile ukuba uqaphele ukuba umahluko we-Ale kunye ne-Lager lilele kwiindlela zokugaya, hayi umgangatho wokugweba umgangatho webhiya.
Incasa ye Lager inyulu ngelixa u-Ale exhomekeke kunambitheka onzima weeops ukufihla iziphene zayo kwaye ngenxa yesi sizathu ukusilela kwe-Lager kwivumba kunye nevumba kuyaziwa ngokulula. Ukongeza, ukwenza i-Lager ifuna iimfuno eziphezulu kumaziko nakwimeko zococeko. Kungenxa yoko le nto bambalwa abenzi bamakhaya abenza iLager. Nangona kunjalo, ukwenza i-Lager elungileyo kunokubonisa inqanaba le-brewpub.
Previous: Yintoni egqiba umbala webhiya?
Okulandelayo: Ngaba ujonge iitanki zoPhuculo loBuchule kufutshane?